Ofnac : notsiahivina ny maha fanabeazana ny angano | NewsMada
Ofnac : notsiahivina ny maha fanabeazana ny angano
Par Taratra sur 19/03/2016
Marihina isaky ny 20 marsa ny Andro eran-tany ho an’ny angano. Tsy mandalo fotsiny izany ho antsika eto Madagasikara, na rahampitso alahady aza io andro io. Nanatontosa “Fitantarana angano” àry ny Tranoben’ny kolontsaina sy ny zavakanto (Ofnac) sy ny minisiteran’ny Kolontsaina, omaly tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena, efitrano Gisèle Rabesahala etsy Anosy. Hetsika nentina nampahatsiahivana ny maha fitaovana nahomby tamin’ny fanabeazana ny ankizy ny angano.
Natao ho fanandratana ny maha Malagasy sy ho fanomezan-danja ny kolontsaina nentim-paharazana ny famerenana indray ny fitantarana angano, toy ny fanao fahizay, teo amorom-patana. Nanana ny anjara toerany lehibe teo amin’ny fiarahamonina malagasy ny angano, indrindra, teo amin’ny lafiny fanabeazana ny kilonga.
Nandinika ny tontolo manodidina azy, toy ny olombelona mitovy amin’ny zavamananaina, ny lanitra sy ny tany, ny ntaolo. Hitany tao daholo ny toetrany sy ny fihetsiny ka nataony kisarisary ho mora raisin’ny ankizy. Lasa fananarana izany ka nampitandrina azy eo amin’ny fiainany mbola holalovany sy nentina namefy koa ny hoaviny.
Tonga nanatrika sy nihaino ny “Fitantarana angano” ireo mpianatra amin’ny sekoly ambaratonga fototra eny amin’ny manodidina ny Tranombokim-pirenena eny Anosy. Ankoatra ny angano, teo ihany koa ny arira. Tsara ny manamarmika fa, amin’ny angano, misongadina kokoa ny fandraisan’ny olombelona anjara, raha toa ka zavatra tsy misy fa entina ampitana anatra ny arira.